Guddoomiyaha Aqalka Sare Oo Kismaayo U Tagaya Xalinta Khilaafka Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada. – Heemaal News Network
Wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Xaashi C/llaahi ayaa maanta ku sii jeeda magaalada Kismaayo.
Socdaalka Guddoomiye Cabdi Xaashi ee Kismaayo ayaa salka ku heysa sii wadida dadaaladii Aqalka Sare ugu jiray xal u helida khilaafka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi ayaa Wariyeyaasha u sheegay inuu Kismaayo u tagayo howshii uu soo waday Aqalka Sare ee ku aadanaa xalinta khilaafka ka dhex taagan dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Waxaa uu sheegay in heer gabogabo ah mareyso howshii uu soo waday Aqalka Sare, isla markaana ay rajeynayaan inta dhiman inay ku guuleystaan.
Aqalka Sare ayaa dhowaan qodobo ka soo saaray khilaafka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada oo ay soo bandhigeen qodobo ay tabanayaan Maamul goboleedyada.
Ciidamada NISA ayaa howlgal qorsheysan ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho ku qabtay xubin ka tirsan Amniyaadka Al-Shabaab. Sida lagu baahiyay barta Twitter-ka ee Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa lagu sheegay in xubinta ka tirsanaa […]
Ehelada Dadkii Saaka Amisom ku Dishay Muqdisho Oo Diiday Inay Aastaan Maydadka.(Aqriso Magacyada)
Ehelada dadkii saaka ay ciidamada AMISOM ku dileen magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aan la aasi doonin meydadka afarta ruux illaa caddaalada laga horkeeno dadkii ka dambeeyay dilkooda. Afartan ruux ayaa la sheegay inay ku […]
Ciidamada Danab iyo kuwo Ajnabi Oo Sheekh Caan ah ku Dilay Wanlaweyn.
Wararka ka imaanaya degmada Wanlaweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ee loo yaqaano Danab oo wehliya Ciidamo Ajnabi ah ay u dhaceen guri ku yaala degmadaas. Howlgalkan oo dhacay xalay […]